Bienvenue sur notre site web Vendredi 16 Novembre 2018
Reboisement Ambatomirahavavy 1er fevrier 2014
Tontosa soa aman-tsara ny asabotsy 01 Febroary lasa teo ny fambolen-kazo fanaon'ny fianakaviam-ben'ny CNaPS isan-taona ho famitana ny adidy sy fanehoana ny fitiavan-tanindrazana, fa ihany koa ho fialam-boly sy fanamafisana ny firaisan-kina. Tao amin'ny fokontany Ambohimahavoa, kaominina Ambohidranomanga Ambatomirahavavy no nanatanterahana ny hetsika ka < paulownia > 1000 sy < pins > 3500 no voavoly.
Nanome toky moa ny lehiben'ny fokontany sy ny fikambanana iray any an-toerana antsoina hoe < Association Lovasoa > izany nanampy tamin'ny fikarakarana ny hetsika rahateo fa hanara-maso ireo asa vita ireo.
Ho fanamarihana ny fandalovan'ny CNaPS tany an-toerana dia notanterahin'ny fianakaviam-beny ny fitia tsy mba hetra ho an'ny fokontany raha notolorana baolina roa sy maillots kosa ny < Association Lovasoa >.
Misaotra ny rehetra dia amin'ny herintaona indray e!!!
ILAINA NY FITANDREMANA
TOUT AU LONG DE NOTRE VIE, SOYONS PRUDENT !
AZA MIREBIKA AN-TAMPON'NY LOZA
CNaPS teny amin'ny hetsika HAONA FI FJKM
CNaPS - EEM : Velom-bolo ny mpiofana tao amin'ny Faritra Boeny
Régime non agricole: 168 019,00 Ar
Régime agricole: 170 422,00 Ar
Régime non agricole: 1 344 152,00 Ar
Régime agricole: 1 363 376,00 Ar
Date d'effet: 01 Mars 2018
Aujourd'hui 106 visites
Hier 207 visites
Ce Mois 2281 visites
Le Mois Dernier 6715 visites